हामीले अहिले कार्यरत देशबाटै बीमा गर्न के गर्नुपर्छ ? अनि कुन कुन रोग लागेमा क्षतिपूर्ति कति पाइन्छ ?
Sun, May 27, 2018 | 19:26:13 NST
13:52 PM (1 year ago)
रतन शर्मा/ कतार
प्रश्न: अहिले सरकारले बीमा शुल्क बढाएको सुनेको छु । हामीले अहिले कार्यरत देशबाटै बीमा गर्न के गर्नुपर्छ ? अनि कुन कुन रोग लागेमा क्षतिपूर्ति कति पाइन्छ ?
उत्तर: पुजन ढुंगेल अधिकारी, उपनिर्देशक, बीमा समिति- रतन जी, बीमा नविकरणको लागि सम्यन्त्र बन्दै छ, चाडै हुन्छ। बीमा शुल्क बढेको छ साथ-साथै सुबिधा पनि बढेको छ। पहिला critical illness भनेर १५ वटा रोग छुट्टाएका थियौं ती रोग लाग्दा बीमाले कभर हुदैन थियो। अहिले यी १५ वटा मध्य कुनै पनि रोग लाग्दा बीमकले बीमीतलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन्छ। र त्यसको लागि ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम पहिलाको प्रिमियममा थप्नु पर्छ। पहिला ५ बर्ष ६ महिनाको बीमा गर्दा १८ देखि ३५ बर्ष सम्मको ब्यतिले ५ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो। यसमै ५ सय रुपैयाँ थप्दा – cancer, kidney failure, primary pulmonary arterial hypertension, multiple sclerosis, major organ transplant, coronary artery bypass graft, ultra graft surgery, stroke, coma, total blindness, mild cardiac infection, banging brain tumors, paralysis, mental illness caused due to accident यी रोग लागेमा बीमकले ५ लाख रुपैयाँ केहि कट्टि नगरी क्षतिपूर्ति दिन्छ।